ကျွန်တော. gtalk မှာ..မြန်မာစာရိုက်လို.မရလို.ပါ - MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော. gtalk မှာ..မြန်မာစာရိုက်လို.မရလို.ပါ
ကျွန်တော. Gtalk ရဲ. typing ရိုက်တဲ.နေရာမှာ....မြန်မာလိုရိုက်လိုက်ရင်.လေးထောင်းအတုံးလေးတွေမြင်ရတယ်။ ဒါပေမယ်.ကျွန်တော်မှန်းရိုက်လိုက်ပြီး.. enter ခေါက်လိုက်ရင်တွေ.ရတယ်။ သူများပြောတာကိုလည်းမြင်ရတယ်. ကျွန်တော် က gtalk setting မှာ... Zaw gyi font ရှာကြည်.တော.လည်းမတွေ.ဘူး .. အဲတာကူညီကြပါဦးဗျာ... :eek::eek::eek:
ဒီလင့်ခ် မှာ သွား down ကြည့်ပါလား bro................